Ikhabethe Lokungena Elihle eCentral Florida - I-Airbnb
Ikhabethe Lokungena Elihle eCentral Florida
De Leon Springs, Florida, i-United States
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Vicki
Indlu eyakhiwe ngamapulangwe yangasese, ephumuzayo, ethokomele (300 sq ft) egumbini elingama-acre angu-6 enekhishi eliphelele langasese, negumbi lokugezela langasese.
Usofa we-Twin Futon onendawo yesidlo sasekuseni, izitsha, izitsha zesiliva, izinto zokupheka, i-TV, ne-inthanethi.
I-patio enkulu emboziwe enezihlalo ezithulile, ebheke umgodi womlilo nendlu ngaphesheya.
Itholakala emzileni omuhle oseduze kwazo zonke izindawo ezithandwayo ze-Central Floridas. 1 Inja encane/ikati engaphansi kwamakhilogremu angu-20 futhi ivunyelwe, imali engu- $ 50 iyadingeka ngokuhlala ngakunye. Ukubhema ngaphakathi akuvunyelwe.
Ikhabethe elihle lezingodo elikhanyayo elinazo zonke izinsiza ukuze ujabulele ukuhlala kwakho, kufaka phakathi igceke elikhulu (270 sq ft) elimboziwe elinezihlalo ezibheke umgodi womlilo onamabhentshi afakiwe, nayo yonke indawo. Indawo enkulu engaphandle kumahektha ayi-6 nokushona kwelanga okuhle nendawo ephephile enokuthula. Izindawo ezimbili ezikhethiwe zokupaka izimoto khona kanye phambi kwekhabethe lamalogi.
4.79 · 98 okushiwo abanye
Yiba seduze nazo zonke izindawo ezikhangayo zaseCentral Florida ngenkathi uhlala endaweni ephumulele eseduze nezindawo zamahhashi.
Imigwaqo eseduze nemizila ivamise ukusetshenziswa abagibeli bamabhayisikili, abagibeli bamahhashi, nabagibeli bezithuthuthu.
Amaminithi angu-20 ukusuka e-Daytona International Speedway, imizuzu engu-30 ukusuka e-Daytona Beach, noma i-Blue Springs State Park (okunconywe kakhulu), ihora elilodwa ukusuka e-St. Augustine, Disney, Universal, SeaWorld, nase-Kennedy Space Center.
Ngitholakala mathupha nangocingo nsuku zonke futhi ngicela ungafaki ama-hashtag ukuze ungithinte uma kukhona okudingayo ngesikhathi sokuhlala kwakho.
Hlola ezinye izinketho ezise- De Leon Springs namaphethelo